कोरोना निको भएका दुई जनामा किन देखियो कोरोनाको लक्षण ? यस्तो भन्छन विज्ञ — Motivatenews.Com
कोरोना निको भएका दुई जनामा किन देखियो कोरोनाको लक्षण ? यस्तो भन्छन विज्ञ
वीरगञ्ज – कोरोना भाइरसको संक्रमणपछि निको भएर घर गएका दुई जनालाई पुन अस्पताल भर्ना गरिएको छ ।
एक रौतहटका युवक र एक भारतीय जमाती विरगन्जको नारायणी अस्पतालमा भर्ना भएका हुन् । स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि दुवै पुनः अस्पताल भर्ना गरिएको अस्पतालका मेडिकल सुपरीटेण्डेन्ट डा मदन उपाध्यायले जानकारी दिए ।
शरीर दुख्ने, आलस्य हुने जस्ता समस्या देखिएपछि अस्पताल आएका दुवैलाई आइसोलेसनमा राखेर उपचार थालिएको छ । साथै थ्रोट स्वाब संकलन गरी कोरोना परीक्षण गर्न पठाइने अस्पतालले जनाएको छ । दुवैलाई अस्पतालले आइतबार डिस्चार्ज गरेको थियो ।
निको भइसकेकामा पुनः किन देखिइरहेको छ कोरोना ?
तर निको भइरसकेका मानिसमा किन देखिन्छ त कोरोना भाइरसको संक्रमण ? यो अहिले धेरैको चासोको विषय बन्न पुगेको छ ।
२०७७ बैशाख २१ गते प्रकाशित